18 အဘို့ရလဒ် hulk
hulk ရဲ့ဗဟို smashdown
hulk အားလုံးရန်သူများကိုတပ်များရမယ်! hulk ရဲ့ဗဟို Smashdown
hulk မြို့အလမ်းများတလျှောက်အပြေးနှင့်သူ၏လမ်းအပေါ်လူတိုင်းနှင့်အရာအားလုံးကိုဖျက်ဆီးနေသည်။ သင့်ရဲ့တစ်ခုတည်းသောတာဝန်သူ့ကိုသူ၏အလမ်းပေါ်တွင်အတားအဆီးကိုကျော်လွှားနိုင်ဖို့အထောက်အကူပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူကအလိုအလျှောက်တိုက်ခိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ သင်သေစားသေစေသောကူညီဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပါသလား ကံကောင်းပါစေ!
ထောင်ထဲမှာ hulk ကနေလွတ်မြောက်ပြီးတဲ့နောက်သူဟာမြို့သို့သွားလေ၏နှင့်ရဲရပ်တည်ချက်-ပယ်နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်, Hulk လမျးပျေါမှာဗုံးနှင့်အတားအဆီးများရှောင်ရှားကိုကူညီပေးပါတယ်။
hulk position နဲ့ဆက်ဆံဂိမ်း
ဆိုင်ကယ်ပေါ်အလွန်ကြီးမားသောရှိသွားပြီစီးနှင့်အဆင့်ပြီးမြောက်ရန် position နဲ့ဆက်ဆံလုပ်ဆောင်။ position နဲ့ဆက်ဆံဖျော်ဖြေဖို့ 1,2,3,4 နှင့်5NUM keys ကိုသုံးပါ။ ဂိမ်းအနိုင်ရမှတစ်ခုချင်းစီကိုအဆင့်အတန်းအတွက်တာဝန်ပေးအပ်အလုပ်တစ်ခုကိုပြီးအောင်လုပ်ပါ။ ပျော်ရွှင်ပါစေ!
Hulk အထူးဆိုင်ကယ်စီးပြိုင်ပွဲကားမောင်းခြင်းနှင့်ထိ မိ. လဲစရာမလိုဘဲအတားအဆီးကျော်ခုန်ကူညီပါ။ ထိန်းချုပ်နေပါနဲ့မြှား keys တွေကိုသုံးပြီးအမြင့်ဆုံးအဆင့်ကိုနှိပ်ပါ။
hulk နှင့်သူ၏ Lover တစ်အံ့သြဖွယ်ရာအရပျထဲမှာသူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးနေ့စွဲ၌ရှိကြ၏။ သူတို့ရန်သူများကိုဖမ်းမိတဲ့မပါဘဲသူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးအနမ်းကိုလုပ်ကိုကူညီပါ။ တစ်စုံတစ်ဦးကသူတို့ကိုစောင့်ကြည့်သောအခါသတိထားပါ, kising ရပ်တန့်ခြင်း, အချိန် ou ပြေးမီကသင်နမ်းဘားဖြည့်စွက်ရန်ရှိသည်လိမ့်မည်
အဆိုပါ hulk ၏လက်စားချေ
ဤသည်ရှိသွားပြီအလွန်အမျက်ထွက်ခြင်းနှင့်အရူးဖြစ်၏ ... စစ်တပ်ကရဟတ်ယာဉ်, ထရပ်ကားနှင့်လေယာဉ်ကိုဖွိုဖကျြ combo Hit နှင့်အောင်မြင်မှုများနှင့်ရှိသွားပြီအရူးဖြစ်၏ ဟူ. ၎င်းဤသည်အလွန်အေးမြအခမဲ့အွန်လိုင်းအရေးယူဂိမ်းထဲမှာအများကြီးပိုသော့ဖွင့်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဘတ်စကက်ဘောပါဝင် Scoobydoo ခြင်း, basket.There hit ဖို့ညှနျကွားခ mouse ကိုသုံးပါဘောလုံးကိုပစ် 21 ကြိမ်ဖြစ်ကြ၏။
သငျသညျကျွန်းတစ်ကျွန်း၌သင်တို့၏ကိုယ်ပိုင် imperium တည်ဆောက်ရန်နှင့်ခုခံကာကွယ်ဖို့ရှိသည်ဘယ်မှာမဟာဗျူဟာဂိမ်း။ ညွှန်နှင့်ပစ်သတ်ရန်အလုပ်ကွက်ကို select နှင့်နေရာချထားပေးရန် mouse ကိုသုံးပါ။
ယူရို 2012 ခုနှစ် Mario
မာရီယိုကိုယူရို 2012 တွင်တက်ရောက်ရန်သူကအားကစားကွင်းများတွင်ဦးခေါင်းကိုတက်ဖျော်ဖြေ။ မာရီယိုရဲ့ noggin ပေါ်တွင်ဘောလုံးဘောလုံးကိုတိုးပွားလာခြင်းနှင့်မှတ်ဇာတ်ကောင် icon တွေကိုထိသွားတယ်!
ben 10 ဂူစွန့်စားမှု
ဒီစွန့်စားမှုခရီးစဉ်အတွက်, ဘင်အသစ် 10 ဂူကိုရှာ။ ဘင် 10 မိမိအမစ်ရှင်လွန်အပေါင်းတို့နှင့်တကွနဂါးကိုဖကျြဆီးကိုကူညီပါ။
အခုတော့အားလုံးငှက်တို့သည်ငှက် Santa အဖြစ်လက်ဆောင်များကိုရရန်အဘို့အသူ့ရဲ့အချိန်လက်ဆောင်ပေးရသည်၎င်း၏လမ်းအပေါ်ဖြစ်ပါတယ်။
ရန်သူစက်ရုပ်တပ်ဖွဲ့များနှင့်၎င်းတို့၏တပ်စခန်းတိုက်ဖျက်ရေး4မတူညီတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်တွင်သင်၏စက်ရုပ်စစ်သားများထွက် Send
ben 10 ဘီအမ်အိပ်စ
ကီဗင်ဆန့်ကျင်အန္တိမဘီအမ်အိပ်စပြိုင်ကားချန်ပီယံ, လူမျိုးဖြစ်လာနှင့်အခြားအဆင့်ဆင့်သော့ဖွင့်ခြင်းနှင့်, Good Luck စီးနင်းစဉ်ဂြိုလ်သားဆုကြေးငွေစုဆောင်းရန် 1st ရာဌာန၌ finish ကိုလိုင်းရောက်ရှိဖို့!
ကျွမ်းကျင်မှု assign နှင့်ဤကြီးမားသော RPG ကမ္ဘာမှာ၌သင်တို့၏အကျင့်စရိုက်ကိုစိတ်ကြိုက်။ သွားရောက်ကြည့်ရှုရန်ဒေသများ၏စာရေးတံ။